April 3, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'April 3rd, 2017'
Kulankii Dhexmaray Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay Micheal Keating iyo Madaxweyne Siilaanyo (VIDEO)
April 03, 2017 – Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo ayaa maanta waxa uu xafiiskiisa ku qaabiley wefdi uu hoggaaminayey ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya Mr. Michael Keating. Kulanka ka dib ayaa waxaa saxaafadda warbixin ka siiyey wasiirka Arrimaha Dibeda Somaliland, iyo Ergeyga qaramada midoobay, iyadoo saxaafaduna su’aalo ka waydiisay ujeedada socdaalkiisa …
Kulankii Keating iyo Siilaanyo (VIDEO)
Kulanka ka dib ayaa waxaa saxaafadda warbixin ka siiyey wasiirka Arrimaha Dibeda Somaliland, iyo Ergeyga qaramada midoobay, iyadoo saxaafaduna su’aalo ka waydiisay ujeedada socdaalkiisa iyo arrimaha Somaliland uu u yimid. Micheal Keating ayaa sheegay ula jeedada uu u yimid Somaliland ay tahay in cilaaqaadka ka dhaxeeya xafiiskiisa iyo maamulka Somaliland kor loo qaado iyo u …
DAAWO: Qaraxii Maanta ka Dhacay Magaalada St. Petersburg ee Dalka Ruushka (VIDEO)
April 03, 2017 – Qaraxyo waaweyn ayaa maanta ka dhacay goob laga raaco tareenada dhulka hoostiisa mara ee Metro-ga looyaqaan oo ku taalla magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka. Qaraxyadan ayaa ku soo aaday xili uu magaaladaasi ku sugan yahay madaxweynaha dalkaasi Ruushka ee Vldamir Putin oo halkaasi kaga qeyb galaya shir looga hadlayo arrimaha warbaahinta. …
Qaraxii Magaalada St. Petersburg (VIDEO)
Qaraxyadan ayaa ku soo aaday xili uu magaaladaasi ku sugan yahay madaxweynaha dalkaasi Ruushka ee Vldamir Putin oo halkaasi kaga qeyb galaya shir looga hadlayo arrimaha warbaahinta. VIDEO – 1 Madaxweyne Vldamir Putin ayaa sheegay in la baarayo qaraxyada iney yihiin kuwo argagaxiso iyo in kale, waxaana goobta uu Qaraxu ka dhacay buux dhaafiyey, Cidamada …
Madaxweyne ku Xigeenka Puntland oo Dhaliil u Diray Dowladda Federaalka (Dhagayso)
April 03, 2017 – Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland C/xakiin C/laahi Cumar ayaa dowladda Federaalka ee Soomaaliya ku dhaliilay inaysan dowladda gurmadkii loo baahnaa aaney u fidin shacabka abaarta ku ku habsatay ee deegaannada uu maamulkaasi ka arrimiyo. Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo aaney weli la imaan wax ka bedalan …
Abaanduulaha Ciidamada Xooga Dalka ee Gobolka Gedo oo ka Cabanaya Saraakiisha Ciidamada Itoobiya
April 03, 2017 – Abaanduulaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ee Gobolkaasi Cabaas Ibraahin Gurey, ayaa Maamulka Gobolka Gedo u gudbiyay dhibaatada saraakiisha Itoobiyaanku ay ku hayaan shacabka iyo ciidamada ku sugan Degmada Baardheere Gobolka Gedo. Wuxuuna sheegay Abaanduuluhu in ciidamada Itoobiya aysan wax ixtiraam siinin shacabka iyo ciidanka Degmada Baardheere, islamarkaana saraakiisha ciidamada Itoobiya ay ku …
Madaxweyne Trump oo ku Hanjebay inay Talaabo ka Qaadayaan Kuuriyada Waqooyi (VIDEO)
April 03, 2017 – Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in dalka Mareykanka oo keliya uu u diyaar garoobi doono sidii uu tallaabo uga qaadi lahaa khatarta nukliyeerka ee kaga imaan karta dalka Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyme Trump oo wareysi siiyay wargeyska The Financial Times ayaa laga soo xigtay isagoo leh in hadii Shiinuhu uu …
Hanjabaada Trump ee W/Kuuriya (VIDEO)
Madaxweyme Trump oo wareysi siiyay wargeyska The Financial Times ayaa laga soo xigtay isagoo leh in hadii Shiinuhu uu xallin kari waayo arrinta Kuuriyada Waqooyi ay taasi noqoneyso in Mareykanku uu faraha la soo galo. VIDEO – 1 Waxaana xukuumadda Pyongyang oo dhowr jeer tijaabisay gantaalo nukliyeer ahi sheegtay inay iminka haysato Gantaalo ay isku …